Palau - Fitantanana ny jono | Reef Resilience
Palau - Fitantanana ny jono
Fanavaozana ny Lapo-dranomandry any Palau amin'ny alàlan'ny fiarahamonina mifototra amin'ny fiarahamonina
Palau dia ahitana ny nosy navela 12 sy ny nosy 700 izay mihazona ny 700 km. Misy karazana nosy sy karazam-borona maro, anisan'izany ny nosy volkano sy ny vatosokay, ny atolls, ny vatoharan-tsambo manodidina ny ankamaroan'ny nosy lehibe indrindra, ary ny vatohara any atsimo. Ny Palau dia manana ny karazam-biby faran'izay miavaka indrindra ao Micronesia, anisan'izany karazana karazana saribakoly mafy, karazam-borona marevaka 400, karazan-trondro reefatra 300, an'arivony tsy manan-kialofana, ary ny voankazo sirak'i Micronesia ihany.
Ny fahitana an'habakabaka an'i Palau fantatra amin'ny anarana hoe "Nosy Mile 70" ary koa ny haran-dranomasina manankarena manodidina azy ireo. Sary © Ian Shive
Nandritra ny taonjato maro, ny rano tao Palau dia nanome fanohanana. Ny faritra afovoan-tany - ny toerana fanjonoana faharoa lehibe indrindra any Palau - dia miankina amin'ny mpanjono sy ny vondrom-piarahamonina manodidina ny sakafo, ny fivelomana ary ny fidiram-bola. Raha ny marina, ny Palauans dia manana ny tahan'ny mpanjono avo lenta indrindra raha oharina amin'ny faritra hafa any Pasifika. Saingy ny fomba fanjonoana maoderina sy ny indostrian'ny fizahan-tany dia mampitombo ny fanjifan'ny jono eto. Na dia manana fitsipi-ponenana mahasalama lalina aza i Palau sy tambajotra lehibe amin'ny faritra voaaro (MPA), ny fanerena ny fanjonoan'ny jono dia tsy afaka nitazona ny tahiry maharitra, ary misy ny fahatsapana fa ny faritra voaaro ihany no tsy ampy mba hikolokolo populaire trondro.
Mba hitantanana ny fanjonoana maharitra dia ilaina ny maka fanazavana momba ny tahiry: firy ny trondro, inona ny karazana, haingana be izy ireo hitombo sy hiteraka, ary firy no mety hamboly nefa tsy hampangorohoro ny jono. Fa ny fanombanana ny tahiry nentim-paharazana dia lafo be loatra sy matanjaka be, izay mitaky taona maro voarakotry ny manampahaizana manam-pahaizana amin'ny vidin'ny vola an'arivony dolara na mihoatra, dia voarara amin'ny ankamaroan'ny mpanjono, indrindra fa any amin'ireo firenena an-dalam-pandrosoana. Ary raha tsy misy ny angon-drakitra vaovao hampahafantarana ny fanapahan-kevitry ny fitantanana dia mety ho simba tanteraka ny angovo azo avy amin'ny angon-drakitra toy ny any amin'ny faritra afovoan-dranon'i Palau, mety hampidi-doza ny fivelomana sy ny fiarovana ny olona miankina amin'izy ireo.
Ao amin'ny 2012, ny National Conservancy dia nametraka tetik'am-pilaminana tany amin'ny faritra afovoan-dranomasina atsimo mba hanombanana ny sata mifehy ny taham-panafana amin'ny fampiasana teknolojika fanamafisana ny tahiry, hampivoatra ny fitantanana ny fitantanana amin'ny alalan'ny fomba fiasa mifototra amin'ny fiaraha-monina, ary hanavaozana ny tahirin-trondro. Nanomboka tamin'ny volana aogositra 2012 hatramin'ny 2013 tamin'ny volana jona dia nanampy ireo mpahay siansa ny mpahay siansa mba hanangona tahirin-kevitra momba ny karazana, ny habeny ary ny fahamatorana momba ny trondro 2,800 voasambotra tao amin'ny ranon'i Palau. Nandrefy ny hazandranony izy ireo ary koa trondro nividianana tao amin'ny tsenan'ny trondro ihany, Happy Fish Market. Ny Palauans dia te-hividy ny trondro misy azy ireo, ny trondro azo tsinontsinoavina mba hanombanana ny gonady dia tsy hevitra voalohany avy amin'ireo mpivarotra trondro ao amin'ny Happy Fish Market, fa ny fandoavam-bola $ 300 'hividianana' nifampiraharaha tamin'ireo mpivarotra vavy teo an-toerana dia nanome mpikaroka ny fahafahana niditra tao amin'ny 600 trondro trondro ho an'ny fanangonana angona - loharanom-baovao mahavariana izay nanome fahafahana hanadihady ny olana momba ny trondron-dranon'i Palau miaraka amin'ny vondrom-bahidin'ny mpivarotra sy ny mpividy.
Gonadin'ny trondro matanjaka amboarina amin'ny tetik'asa fanombanana amin'ny Palau Stock. Sary © Andrew Smith
Ny teknikan'ny data-mahantra dia miankina amin'ny habetsaky ny habeny amin'ny fanombantombanana mba hamaritana ny habetsaky ny hafahafa sy ny ampy. Amin'ny ankapobeny, ny teknika dia mampiasa ny angon-drakitra roa eo an-toerana, ny haben'ny trondro sy ny fahamatoan'ny trondro, miaraka amin'ny fampahalalana biolojika efa misy, mba hamokarana ny tahan'ny tsy fahampiana. Raha ny fitsipika ankapobeny, raha trondro farafahakeliny 20% amin'ny fanimbana voajanahary voajanahary voajanahary dia ahafahan'ny mpanjono manohana azy. Latsa-danja noho izany sy ny jono izany. Raha 20% no isa ambony indrindra, manantena ny mpahay siansa fa hahita fisarihana ho an'ny 30-50% ny fanala voajanahary. Tena nahatsiravina ireo zava-niseho tao Palau, mampiseho fa ny 60% ny trondro trondro dia tanora, ka nahatratra ny 3-5% ny tsy fahampian'ny fotoana niainany. Ny vokatr'izany dia mazava tsara: raha ny ankamaroan'ny trondro dia tsy mamerina, ao anatin'ny fotoana fohy dia tsy hisy intsony ny trondro.
Ireo manampahaizana sy manam-pahaizana momba ny varimbazaha dia nanolotra ny vokatry ny tetik'adin'ny tetik'asa amin'ny fivorian'ny fiarahamonina manerana an'i Palau. Miaraka amin'ny fahalalana vaovao avy amin'ny angon-drakitra, dia nifindra haingana ireo vondrom-piarahamonina avy any Palau avy any avaratra mba hivoatra haingana ireo paikady fitantanana izay mety hamerenana ny isan'ny trondro.
Ny tsirairay izay tafiditra ao anatin'ilay tetikasa, avy amin'ny mpahay siansa ho an'ny mpanjono, dia manantena fa ny vatoharanon'i Palau dia ho avy tsy ho ela amin'ny fanarenana, fa mbola ilaina ny fitantanana sy ny fanavaozana politika. Ny Palau dia mandroso amin'io lalana io amin'ny alàlan'ny fampandrosoana politika izay manova ny fidirana amin'ny alàlan'ny fahazoana maoderina malalaka mankany amin'ny rafitra mifototra amin'ny zo, toy ny fantsom-panafody. Ny mpitantana ny orinasa dia miasa mba hampidirana ireo fitaovana fitantanana ny fanjonoana, toy ny fetra farafahakeliny sy farafahakeliny, ny fiarovana ny fanangonana haitao lehibe, ary ny fanatsarana ny famolavolana ny tambajotram-piarovana manerana ny firenena amin'ny tetik'asa fitantanana ny angovo. Ireo mpandray anjara dia miezaka ny manangona fanangonana tahirin-tsakafon'ny firenena ao amin'ny toeram-pivarotana lehibe ary koa ny programa fanaraha-maso maharitra amin'ny fisotroan-drano amin'ny alalan'ny fampivoarana ny fomba fanaraha-maso ny fikarakarana ny rano izay manome ny angon-drakitra ilaina amin'ny fanombanana ny tahiry.
Farany, ny fahombiazan'ny fitantanana ny harena voajanahary dia miankina betsaka amin'ny fampiharana sy ny fanarahan-dalàna. Tamin'ny volana Martsa 2014, ny Conservancy Nature sy WildAid dia niara-niasa mba hamolavola rafitra fampiharana ho an'ireo Faritra avaratr'i Palau izay azo ampiharina, azo vidiana ary azo tanterahana mandritra ny efa-taona. Ny rafitra dia manome fandrakofam-pahaizana matihanina amin'ny sehatra manan-danjan'ny mpanjono, ny MPA, ary ny fomba fidirana. Ny tetikady dia miara-mikirakira fakan-tsarimihetsika avo lenta ary tamba-jotra mahazatra ao amin'ny VHF amin'ny alàlan'ny fametrahana stratejika, fantson-drano, ary fiaramanidina mirenireny mba hanomezana fisehoana tsy tapaka sy haingam-pandeha manerana ny faritra marin-dranomasina maromaro (MMAs).
Ny famahàna ny olana momba ny fandrobana dia tsy mora mihitsy - misy ny fivarotana sy ny sorona.
Ny safidim-pitantanana dia mifototra amin'ny fametrahana ny haben'ny fametrahana amin'ny toerana mihidy mandritra ny fotoana lavalava mandra-pahatongan'ny isan'ny populaire trondro. Saingy ireo safidy ireo, izay miezaka ny hifanipaka sy sarotra amin'ny fanatanterahana azy, dia mora kokoa ny manangana sy mampihatra rehefa misy mpanarara mandray anjara amin'ny fanombanana ny olana ary miady hevitra amin'ny vahaolana.
Ny ezaka fiaraha-miasa eo amin'ny mpahay siansa sy ny mpanjono dia manan-danja amin'ny fahombiazan'ilay tetikasa. Ny fahaizana sy ny traikefa nananan'ireo mpanjono Palauan dia nanampy tamin'ny famoahana ny dingana siantifika sy hampitomboana ny fahatsiarovan'ny fiarahamonina momba ilay olana.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoPalau Protected Network Fund
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoWildAid
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoPalau International Coral Reef Center
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoPalau Conservation Society
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoBureau of Marine Resources
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy biraon'ny seraseram-piarovana any Palau
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoMurdoch University
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoLahatsary: ​​Fiatrehana ny fiarovana ny orinasa mampidi-doza any Palau